Ragaan Nu Irratti Dhiyaate Kijiba Jedhu Himatamtoonni
Caamsaa 04, 2012
Itiyoopiyaa dhaddacha 3ffaa galmee himannaa obbo Teshaalee Bakashiifaa irratti waaree dura ragaalee kan ba’an himatmtoota sadii turan. Kanneen keessaa dursanii kan dhiyaatan obbo Girmaa Wayyeessaa ti.
Ragaalee isaanii dhiyeessuu duras dhimma ittiin himataman dubbachuuf mana murtii gaafatanii jiru. Akka himatamaan kun jedhanitti himannaan sun qindaa’ee kan dhiyaate ta’uu isaaf ragaan inni duraa yakka dalagan jedhameef yeroo sanatti umurii isaan qaban ture.
Abbaan alangaa bara 1992 qabee obbo Mengistu Girma Wayyeessaa miseensa ABO akka ta’an gochuun himannaa kan irratti dhiyeesse ta’uu ibsanii yeroo sanatti umuriin isaanii waggaa 11 ta’uu mana murtiif ibsaniiru.
Ragaaleen abbaan alangaa irratti dhiyeesses ragaan isaanii walii walii isaa kan wal dhiitu waan ta’eef manni murtichaa akka isaaniif hubatu gaafatanii walaba akka isaan gad dhiisu iyyataniiru. Ragaalee isaan dhiyeeffatanis kana kan mirkaneessuuf ta’uu dubbataniiru. Guyyaa kaleessaa galmee himannaa obbo Bekelee Garbaafaa irratti himatamtoonni tarreeffaman ragaa ofii irraa ittisuu isaanii dhageessisuu eegalanii jiran.
Guyyaa dhuma kana obbo Bekele Garbaa raga ba’umsa mana murtichaa dhageesisaniin qabsoo siyaasaa karaa nagaatti waan amananiif dhaaba qabsoo hidhannoo geggeessu waliin wal ta’uu akka hin dandeenye dubbatan. Caamsaa tokkoo fi lama bara 2004s raga ba’umsi ofi irraa ittisaa kun dhaga’amu kan itti fufu ta’uu manni murtichaa beeksisee jira.
Galmee himannaa Teshaalee Bekeshii irratti himatamtoonni dhiyaatan 69 yoo ta’an manni murtichaas ragaalee 200 ta’an kan dhaggeeffatu ta’uu beeksiseera. Galmee himannaa obbo Bekelee Garbaa irratti himatamtoonni dhiyaatan immoo sagal yoo ta’an martinuu gocha shororkeessummaan kanneen shakkamani.